Mayelana NATHI - Iqembu le-INPVC
INPVC selibhalwe uphawu kusukela ngo-2020 ngamakhemikhali e-PVC (Polyvinyl Chloride) avela e-HAOYUAN PVC PLASTIC. Kubandakanya umndeni omkhulu wezinhlanganisela ezilungele ukusetshenziswa kuwo womabili ama-granules afakwe amapulasitiki futhi aqinile enzelwe ngokukhethekile futhi ahlelelwa izinhlelo ezahlukahlukene. I-INPVC ikhiqiza amakhompiyutha ajwayelekile noma ahlanganisa amakhemikhali enziwe ngendlela oyifunayo, asukela kakhulu ocingweni nasekhebheni, ugesi kanye nogesi, ukwakha nokwakha izimboni zezimoto nezokwelapha.
Sisezingeni eliphambili lobuchwepheshe bokucubungula i-PVC, sifaka ngaphezu kweminyaka engama-27 yokukhiqiza okuhle kuhlu olubanzi lwemikhiqizo. Izinsiza zethu eziqinisekiswe nge-ISO-9001 zigxile kwezokuphepha, ikhwalithi kanye ne-automation enikeza ukwakheka kokucutshungulwa okuphezulu kakhulu nokucubungula, kuwo womabili amafomu we-powder namakhemikhali.
Okubaluleke kakhulu, siqhubeka ngokuthuthukisa izinto ezinobungane ukuze kuthuthukiswe ukusimama. Yonke imikhiqizo yethu yenziwe ngenqubo elungiselelwe ngokulandela ikhwalithi, impilo nokuphepha. Umthungi owenziwe ngamakhemikhali nezithasiselo kuvunyelwe nge-RoHs, REACH kanye nesitifiketi se-FDA.
Ngokugxila emisha nase-R & D, i-INPVC isilungele ukuhlangabezana nezidingo eziguqukayo njalo zemakethe yomhlaba. Isikhungo sethu sokuthuthuka kwezobuchwepheshe sisivumela ukuthi sithuthukise izixazululo ezenziwe ngezifiso ezibhekiswe ohlotsheni lwesicelo, izinqubo nezimpawu zemishini yeklayenti lethu lomenzi we-PVC.
Ama-granules akhiqizwe emnyangweni wokulawulwa kwekhwalithi, ahlolwe elabhorethri yethu yokulawula ikhwalithi, efakwe ubunzima bokuhlola, umshini wokushicilela oshisayo, umhloli wobulukhuni, isibali se-polymer density, i-laboratory extruder, njll., izingxenye, ama-hose granules, ama-injection parts granules, ama-granules ahlanzekile nokunye, okudliwayo kukhiqizwa, ngokwezindinganiso zosuku lomhlaba, futhi kunikezwa amakhasimende ahlonishwayo.
Sizibophezele ekuletheni izixazululo zokwandisa izinqubo, ukunciphisa izindleko nokuthuthukisa izakhiwo zemikhiqizo yokuphela ye-PVC yamakhasimende ethu. Inhloso yethu ukwakha ukubambisana nokubambisana okuseduze namakhasimende ethu. Futhi wonke amakhasimende azozuza kokwazi kwethu, ulwazi lwethu lwesikhathi eside kanye nensizakalo yethu.
Isipiliyoni Sokukhiqiza Seminyaka Engama-27
Umugqa Ohlanganisa kakhulu we-PVC
Ilungu Lezinhlangano Zemboni Yezimboni zaseChina
Umhlinzeki Wokuxazulula Isixazululo se-One-Stop PVC
I-ISO 9001 Umnikazi Wesistimu Yokuphatha i-ISO9001
Laboratory Professional nge 65 Equipments
I-R & D neTechnical Team abanesipiliyoni se-20years
Izinto eziyi-100% zezintombi 100%
I-Eco-friendly nge-REACH, isitifiketi se-RoHS
Ukwakheka okwenziwe ngokwezifiso
Izinketho Zokufaka Ezihlukile
Womabili la ma-Rigid ne-Soft PVC Compounds Ayatholakala
Kokubili i-Powder ne-Compounds Form Iyatholakala
Ukuhlolwa Kwesampula Yamahhala
Izinsizakalo Zamahhala Zokubonisana Ngezobuchwepheshe
Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe Kwezobuchwepheshe
Insiza engu-24h online
Insiza yokusebenza kahle
Isikhathi sokulethwa okusheshayo
Imigomo yokukhokha eguqukayo
Insizakalo ephawuleka ngemuva kokuthengisa
Iqembu le-NPVC, ongomunye wabakhiqizi abahamba phambili nabathengisi baseChina bezinhlanganisela nezithasiselo zezimboni zeplastiki zePolyvinyl Chloride (PVC), banezinkampani ezingaphansi ezintathu.
Isungulwe ngo-1993, ikhiqiza ama-100% amakhemikhali e-PVC aqinile futhi aguquguqukayo wezinhlelo zokusebenza eziningi ezisebenzisa umjovo, i-extrusion kanye namasu wokucubungula.
I-2.Zhentai New Material Co, Ltd.
Isungulwe ngonyaka we-2002, ikhiqiza futhi ithengise izixazululo ze-eco-friendly ezinikeza ukusebenza okuhle kakhulu kwezobuchwepheshe kumkhakha wokucubungula we-PVC.
Isungulwe ku-2010, ukungenisa uphawu lwe-PVC lokucubungula impahla eluhlaza kanye nokuthekelisa okwenziwe ngokwezifiso kwe-PVC kwakwakhe nezithasiselo emhlabeni wonke